तपाईंको घरमा भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले गर्ने भोजन सन्तुलित र उमेरअनुसारको छ ? तपाईं वा जोसुकैले आफ्नो उमेरअनुसार आवश्यक पर्ने खानेकुरा सेवन नगरे थुप्रै शारीरिक समस्या निम्तिन सक्छन् । कुपोषणले बालबालिकाको मानसिक विकासमा समेत असर पार्छ, मस्तिष्कको तीक्ष्णता प्रभावित हुन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार खानपानमा असन्तुलन वा उपयुक्त आहार पुर्‍याउन नसकेर हाम्रो मुलुकमा पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन छ । उमेरअनुरूप उचाइ नपुगेर उनीहरूमा पुडकोपन देखिएको हो । २७ प्रतिशत बालबालिका उमेरको तुलनामा कम तौलका छन् । १० प्रतिशत त ख्याउटेपनको सिकार छन् । यसै साता सार्वजनिक गरिएको नेपाल जनसांख्यिक ...
राजधानीका अस्पतालको तथ्यांक केलाउँदा नौ महिना नपुग्दै जन्मिने शिशुहरूको संख्या बढदै गएको छ । समयअगावै जन्मिने शिशुहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने बाल विशेषज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूमा देखिने धेरै स्वास्थ्य समस्यामध्ये मुख्य रेटिना (दृष्टि पर्दा) च्यातिनु हो । मुख्यगरी मधुमेह रोगी महिलाबाट जन्मने शिशुमा यस्तो समस्या देखिने गरेको तिलगंगा आँखा अस्पतालका रेटिना सर्जन डा. सन्यम बजिमयले बताए । ‘रेटिना ठूलो समस्या होइन, यसबारे चेतना नहुँदा रेटिनाका कारण अधिकांश शिशुहरू आँखाको पूरै दृष्टि गुमाइरहेका छन्,’ डा. बजिमयाले भने, ‘समयअगावै जन्मिएका शिशुलाई अस्पतालले आँखा अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने हो, गर्दैनन् ...
दसैंमा सचेत भएर मासु उपभोग गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । विज्ञका अनुसार यो समयमा मासुको गुणस्तर नहेरी जथाभावी सेवन गरिए धेरै प्रकारका रोगबाट पीडित हुने खतरा बढ्छ। विज्ञहरूले दसैंमा सकेसम्म ‘थोरै खाऔं तर गुणस्तरीय शुद्ध मासु नै सेवन गरौं’ भन्ने सुझाव दिएका छन् । दसैंमा सबैभन्दा बढी खसीबोकाको मासु उपभोग हुन्छ । सामान्य समयभन्दा यो समयमा झन्डै आठ दोब्बर हाराहारीमा मासु खपत हुन्छ । सकेसम्म छाला भएको मासु प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’बंगुरको हकमा भने बोसो भएको मासु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । खरिद गरेको वा घरमै ...
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत कान्तिपुर डेन्टल कलेजको विद्यार्थी कल्याण परिषदको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र सम्वद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्यानलै विजयी भएको छ । बुधबार भएको निर्वाचनबाट परिषदको सभापतिमा अखिल क्रान्तिकारीका प्रकाशकुमार पाण्डेले १५७ मत प्राप्त विजयी भए । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी अशुतोष शुक्लले ८६ मत प्राप्त गरे । उपसभापतिमा राकेशमणि चौधरी, सचिवमा पंकज पाण्डे, सहसचिवमा लोकराज ढकाल र कोषाध्यक्ष पृथ्वी अधिकारी विजयी भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा प्रभाकर विश्वास, पवित्रा रेग्मी, अंकित जैसवाल र आलोकबाबु भट्टराई विजयी बनेका छन् । विजयी पदाधिकारीहरुलाई कलेज पुगेर क्रान्तिकारी अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष ...
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई एमबीबीएस अध्यापन शुल्कसीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले भने ०७३ मंसिर १९ मै उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी शुल्कसीमा तोकेको थियो । गत वर्ष निर्धारित शुल्क दुई वर्ष लागू हुने व्यवस्था छ । केयूले कलेज सञ्चालककै सहमतिमा शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । विश्वविद्यालयका स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन राजेन्द्र कोजूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ४३ लाख ९० हजार र उपत्यकाबाहिर ४७ ...
बाजुराको उत्तरी क्षेत्र कोल्टीमा देखिएको मलेरिया रोगको संक्रमण नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय टोली बाजुरा आइपुगेको छ । टोलीले कोल्टी क्षेत्रमा देखिएको संक्रमणको अवस्था अध्ययन गर्नुका साथै नियन्त्रणका लागि समेत आवश्यक उपचार सेवा शुरु गर्ने भएको छ । कोल्टी आसपासका बस्तीमा यसअघि मलेरियाका २६ जना बिरामी भेटिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभाग, सरुवा रोग तथा महामारी व्यवस्थापन शाखाको टोली मंगलबार आइपुगेको जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले बताउनुभएको छ । टोलीमा भेक्टर कन्ट्रोल इन्स्पेक्टर र ल्याव टेक्निसियन रहेका छन् । टोलीले मंगलबारै प्रभावित सातवटै बस्तीबाट सातजना स्वयंसेवक छनोट गरी लामखुट्टे नष्ट गर्ने ...
हरियो धनिया सुगन्धयुक्त हुने भएकाले यसले खानाको स्वाद बढाउँछ । अरुचिको समस्या भएकाहरूले चटनी अथवा तरकारीमा हरियो धनिया मिसाएर खाँदा राम्रो हुन्छ । – आँखासम्बन्धी सबै किसिमका समस्या भएकाहरूका लागि हरियो धनियाँ खानु लाभदायक हुन्छ । – हरियो धनियाले शारीरिक कमजोरी हटाउन मद्दत गर्छ । – हरियो धनियालाई भोजनमा सामेल गराउँदा पेटसम्बन्धी समस्या कम हुँदै जान्छन् । पेटमा रहेका कीटाणुलाई पनि हरियो धनियाले मार्ने गर्छ । – धनियाँ खाँदा शरीरमा सञ्चय भएका अक्सिडेन्टलगायत विकार शरीर बाहिर निस्किन्छ । – धनियाले रगतलाई शुद्धीकरण गर्छ ।
शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्वमध्ये अधिकांशको स्रोत खानेकुरा नै हो, जो हामी ग्रहण गर्छौ । प्रकृतिमा पाइने खानेकुरामा आ-आफ्नै पौष्टिक तत्व हुन्छ । ति सबैको सन्तुलित मात्रा शरीरलाई चाहिन्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि सन्तुलित पौष्टिक आहार अति आवश्यक हुन्छ । शारीरिक सक्रियतासँगै खानपानको सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने, सामान्य रोगहरुको असर रहँदैन । किनभने यसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ । यहाँ त्यस्तै केहि ‘सुपर फुड’ दिइएको छ, जसको नियमित सेवनले रोगको भयबाट बच्न सकिन्छ । १. नीमको पात नीमको पात सहजै उपलब्ध हुन्छ । त्यसो त नीमको पातदेखि बिज, ...
अहिले धेरैजसो बच्चा घरभित्रको परिधीमा खुम्चिएका छन् । उनीहरु मोवाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप, टिभीमा भुलेका छन् । उनीहरु इन्टरनेटमा जोडिन्छन् । साथी खोज्नछन्, गेम खेल्छन्, भिडियो सामाग्री हेर्छन् । भर्चुअल संसारमै रमाउँछन् । उनीहरुको निम्ति बाहिरी दुनिया बिरानो बन्दै गएको छ । क्षणिक रुपमा यसले सजिलो भएको छ, अभिभावकलाई । बच्चा लड्ने, चोट लाग्ने, फोहोर मैला लाग्ने भय हुँदैन । घर बाहिर नखेल्ने भएकाले उनीहरुलाई रेखदेख गरिरहनु पनि पर्दैन । यद्यपी यसको दीर्घकालिन असर भने भयावह छ । अहिले भर्चुअल माध्याममा अल्भिm एका कारण बच्चाहरुको शारीरिक गतिविधि कम ...
धुलो धूँवा, प्रदूषणको सोझो असर हाम्रो अनुहारको छालामा पर्छ । अनुहार रुखो, फुस्रो हुने, चाहुरिने, चाया पोतो आउने बाह्य कारण पनि यिनै हुन् । खासगरी किशोरवयमा अनुहारमा डन्डिफोर आउने समस्या बढी हुन्छ । यसको दाग रहने भएकाले अनुहारको सौन्दर्य फिका बनाइदिन्छ । हाम्रो छालामा स-सना रोम-छिद्र हुन्छ । त्यही तेल ग्रन्थी ब्याक्टेरियाले ग्रस्त हुन्छ । र, स-सना फोका उठ्ने, घाउ बन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या तैलिया छाला भएकाहरुमा बढी देखिन्छ । यद्यपी कतिपयमा भने तैलिया छाला नभएपनि डन्डिफोर आउन सक्छ । किन हुन्छ ? तेल ग्रन्थीले तेलको अधिक उत्सर्जन ...